Sawiro: Wasiirka arrimaha gudaha Juxa oo maanta socdaal lugta ah ku maray Cadaado - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Wasiirka arrimaha gudaha Juxa oo maanta socdaal lugta ah ku maray...
Sawiro: Wasiirka arrimaha gudaha Juxa oo maanta socdaal lugta ah ku maray Cadaado
Cadaado (Caasimadda online) – Wasiirka Aririmaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa ayaa galabta kormeer lugta ah kusoo maray qeybaha kala duwan ee Magaalada Cadaado si uu usoo qiimeeyo xaaladaha kala duwan haddii ay ahaan laheyd dhanka Nololsha, Nabadda, amniga, is dhexgalka Bulshada iyo horumarka.
Wasiirka ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliyey qaar ka tirsan wasiirada dowladda Soomaaliya, Madaxweyne ku xigeenka Galmudug, Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, guddoomiye ku xigeenka Baarla,aanka iyo afhayeenka wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Cabdifataax Daahir Mire.
Wasiirka ayaa indha indheen kusoo sameeyey jidad waaweyn oo laga sameeyey Magaalada Cadaado waxaana jidadka kala baray Guddoomiyaha Degmada Cadaado oo socdaalka dhankiisa ka qeyb qaatay, wuxuuna uga mahadceliyey Juxa Madaxda Galmudug sida ay ugu dadaaleen Cadaado.
Sidoo kale wasiirka ayaa qeybaha kala duwan ee Bulshada kula sheekeystay gudaha Magaalada Cadaado, wuxuuna shaaha kula cabay Maqaayadaha kala duwan ee ku yaal Magaalada.
Sidoo kale wuxuu booqday qaar ka tirsan Haweenka Hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ku sugnaa Magaalada Cadaado, wuxuuna ku dhiirageliyey inay horey usoo wadaan shaqada ay hayeen, dhankodana waxay haweenka wasiirka u shubeen Caano ay ugu talagaleen.
Markii uu soo dhamaaday socdaalkii lugta ahaa ee Magaalada ayuu saxaafadda kula hadlay baar ku yaal bartama magaalada, wuxuuna ka mahadceliyey sida sharafta leh ee dadka Cadaado usoo dhaweeyeen.
“ Runtii waan ku faraxsanahay inaan Maanta Magaalada Cadaado socod lugta ah kusoo maro, midaas waxay muujineysaa amniga ka jiro Magaalo oo ay sabab yihiin Madaxda Galmudug, waxaan codsanayaa in horey loo sii socdo Magaaladana ay sidaas sii ahaato” ayuu yiri Wasiir Juxa.
Socdaalka lugta ee wasiirka ayaa imaaday kadib markii uu Maanta ka qeyb galay doorashadii Madaxweynaha Galmudug ee uu ku guuleystay Axmed Ducaale Geelle Xaaf, waxayna aheyd doorasho ku dhacday si cadaalad ah.